Katarzyna Banasik's lahatsoratra momba Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Katarzyna Banasik
Mpitantana varotra nomerika sy mpitantana ny vokatra. Liana amin'ny fitantanana ny vokatra nomerika sy ny marketing - ny zava-drehetra manomboka amin'ny fironana fananganana rindrambaiko, teknika fitantanana tetikasa, fironana UX ka hatramin'ny paikadim-barotra.
Alahady, Novambra 7, 2021 Alahady, Novambra 7, 2021 Katarzyna Banasik
Voucherify dia rindrambaiko fitantanana fampiroboroboana sy tsy fivadihana voalohany amin'ny API izay manampy amin'ny famoahana, mitantana ary manara-maso ny fampielezan-kevitra fampiroboroboana manokana toy ny tapakila fihenam-bidy, fampiroboroboana mandeha ho azy, karatra fanomezana, fandatsaham-bato, programa momba ny tsy fivadihana, ary programa fandefasana. Ny fampiroboroboana manokana, ny karatra fanomezana, ny fanomezana, ny tsy fivadihana, na ny fandaharan'asa fanondroana dia zava-dehibe indrindra amin'ny dingana voalohan'ny fitomboana. Ny fanombohana dia matetika miady amin'ny fahazoana mpanjifa, izay ny fandefasana tapakila fihenam-bidy manokana, fampiroboroboana sarety na karatra fanomezana dia mety ho zava-dehibe amin'ny fitaomana mpanjifa vaovao. Maherin'ny 79% ny Etazonia
Alakamisy Janoary 21, 2021 Alakamisy Janoary 21, 2021 Katarzyna Banasik
Taorian'ny fivarotana zoma mainty, ny fivarotana krismasy ary ny varotra aorian'ny krismasy dia hita fa ao anatin'ny vanim-potoana fivarotana mankaleo indrindra amin'ny taona indray izahay - mangatsiaka, volondavenona, avy ny orana ary ny oram-panala. Mipetraka ao an-trano ny olona fa tsy mandehandeha mitety ireo toeram-pivarotana. Ny fanadihadiana iray nataon'ny mpahay toekarena, Kyle B. Murray tamin'ny 2010, dia nanambara fa ny fiakaran'ny masoandro dia mety hampitombo ny fanjifana sy ny fahafahantsika mandany. Toy izany koa, rehefa rahona sy mangatsiaka dia mihena ny fahafahantsika mandany. Ankoatr'izay, ao amin'ny